Dowladdaha Hindiya iyo Soomaliya oo Isweedaarsanaya Maxaabiis Xukuman | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Dowladdaha Hindiya iyo Soomaliya oo Isweedaarsanaya Maxaabiis Xukuman
Dowladdaha Hindiya iyo Soomaliya oo Isweedaarsanaya Maxaabiis Xukuman
Golaha wasiiradda dalka India ayaa meel mariyay heshiis ay la galeen dowladda Federaalka soomaaliya kaa oo ku aadan in dib loo soo celiyo maxaabiista la xukumay oo u kala dhashay dalalka Soomaaliya iyo india kuwaa oo labada dal ku kala xiran.
“Saxiixitaanka heshiiskan ayaa fududeenaya maxaabiista Indian-ka ah ee ku xeran Soomaaliya in ay dib ula midoobaan qoysaskooda iyadoo qeyb ka mid ah xukunkooda ay ku dhameysanaayaan dalkooda si loo dhaqan celiyo” sidaas ayaa lagu yiri warqad ay soo saareen golaha wasiiradda ee dalka India.
Dowladda India ayaa sidoo kale sheegtay in ay la saxiixatay dalal badan heshiis ku aadan dib u soo celinta maxaabiista India u dhashay ee ku xiran dalalka shisheeye.
Dowladda india ayaa sidoo kale sheegtay in ay dib u celin doonto qaar kamid ah maxaabiista xukuman ee Soomaaliyeed kuwaa oo ku xiran xabsiyada dalka India si ay dalka Soomaaliya ugu dhameystaan xukunkooda waxaana ay xustay in ay tahay mid u wanaagsan maxaabiista iyo waalidiintooda in dalkooda hooyo ay ku xernaadaan halkaa oo dhaqan celin bulshadeed iyo mid maskax aahan ay ka heli karaan.
Ma cadda in maxaabiitsa lays weydaarsanayo oo ay sheegtay India in ay kamid yihiin 118 maxaabiiis oo loo heysto falal burcad badeednimo kuwaa oo ku xeran xabsi ku yaala magaalada Mombai ee dalka India iyadoo wasiirka arimaha dibadda dalka soomaaliya uu horay u sheegay in uu dadaaal dheer gelin doono sii deynta maxaabiista Soomaaliyeed ee ku xeran dalalka caalamka.